Wow, ndatenda nekuda kwechinyorwa Doug. Ndinonzwa kuremekedzwa… 🙂
Dambudziko raunotsanangura rekusanyatsoziva nzira yekuona idzi mhando dzekusagadzikana ndiro dambudziko hombe randinoona. Kana ndikaratidza mugadziri wepurogiramu asingazive chinhu nezve chengetedzo chidimbu chekodhi uye ndichivabvunza kana yakachengeteka, hongu ivo vanozotaura kuti yakachengeteka - ivo havazive zvavari kutsvaga!
Kiyi chaiyo pano kudzidzisa vagadziri vedu nezve zvekutsvaga, uye maitiro ekugadzirisa. Ndicho chaiva chinangwa chezvinyorwa zvangu zviviri.
Jan 3, 2007 na2:37 PM
Inogona kunge isiri iyo nzvimbo chaiyo asi akauya kuzozivisa chinhu chakakomba.
PS: Ndinoda kuzivisa nezve njodzi huru muwordpress yandakakwanisa kuwana.Its major hack in wordpress having a risk ye 7/10.Ini handisi advertising but do look at my post html-injection-and-being. -hacked.Ndokumbirawo muzivise nezve izvi kune mamwe mablogger.Ndakaita hurukuro naMatt(WordPress) paemail nezvazvo
Jan 6, 2007 na8:43 PM
Ndatenda nekundizivisa nezve izvi - ndakakwidziridzwa kuWordPress 2.0.6. Ndinotenda kuti yakagadzirisa nyaya iyi.
Jan 6, 2007 na8:47 PM
Yes its over now.Great kuti the next version yakabuda fast
PS: tinogona here kuwana chekubatanidza chekuchinjana? ndiudze kana uchida zano
Pane mudziyo uripo here unogona kuita scan
offline WordPress MySQL tafura inotengeswa kunze kubva phpMyAdmin?
Isu tine WordPress MYSQL dhatabhesi inoita kunge ine
aive ne SQL jekiseni.